Dan Hoffman - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Dan Hoffman wuxuu ku koray dhinaca koonfureed ee Chicago ka hor inta uusan dhigan kulliyadda Occidental ee magaalada Los Angeles. Tan iyo markii uu qalin jabiyay, Dan wuxuu ku noolaa kana shaqeeyey magaalooyin iyo dalal badan oo adduunka ah. Wuxuu la shaqeynayay ardayda dugsiga sare in ka badan 13 sano. Dan wuxuu bilaabay shaqadiisa hogaaminta ardayda ee ku saabsan halxiraalaha cidlada iyo safarada adeeg-waxbarasho ee Hindiya iyo Ecuador. Ugu dambeyntiina, wuxuu u wareegay macallinka fasalka, isagoo casharro ka baranayay dhammaan Bini-aadamnimada laga bilaabo Ganacsiga iyo AP US History. Muddo shan sano ah Dan wuxuu la noolaa oo la shaqeynayay ardayda dugsiga sare iskuul boodhin ah oo ku yaal Estes Park, Colorado halkaas oo uu ka ahaa Waalidka Guriga iyo Cilmiga Bulshada iyo macalin Ingiriis. Kahor intaadan aqbalin Madaxa Xafiiska Dugsiga ee CEC Parker, Dan wuxuu ahaa Agaasimaha Dugsiga Sare ee STEM School Highlands Ranch.
Dan waxay aad u xiisaynaysaa inay ka dhigto barashadu mid khuseysa oo macno u leh ardayda dugsiga sare isla markaana isla markaa u diyaarinaya talaabooyinkooda xiga ee nolosha. Dan wuxuu qiimeeyaa himilada Koleejooyinka Hore ee Colorado iyo inuu hubiyo in arday kasta, qof kasta oo uu yahay, la siiyo fursadda ugu wanaagsan ee uu ku raadsado hamigooda iyo himilooyinkiisa.
Markuu Dan shaqeynin wuxuu mashquul ku yahay barida gabadhiisa shan jirka ah iyo wiilkiisa labo jirka ah sida loo kaxeeyo baaskiilka iyo dabaasha.